Serivisy OEM - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Kitapo vita amin'ny formwork
Horonantsary niatrika horonantsary
Kitapo vita amin'ny Poplar
Kavina vita amin'ny birch
Kitapo hazo mafy
OSB (Birao vita amin'ny kofehy miorina)
HPL Birao tsy mirehitra
Serivisy Import sy Export
Mihoatra ny 25 taona ny vokatra vokarin'ny mpanjifa OEM tontonana hazo.
Nanomboka tamin'izay, ny ekipan'ny hazo OEM any amin'ny firenena 50 mahery manerana ny kaontinanta dimy.
OEM / ODM dia raisina an-tanan-droa. Manana tombony lehibe amin'ny R&D izahay, vita amina vokatra vita amin'ny hazo indrindra amin'ny tabilao sy birao melamine.
Nandritra ny taona maro niainana niaraka tamin'ny mpanjifantsika manerantany, dia raisina ho mpiara-miasa stratejika azo antoka izahay noho ny haavon'ny traikefa sy ny fahaiza-manao natolotra tamin'ny fampandrosoana, ny endrika ary ny fanohanana ara-barotra ny vokatr'izy ireo.
Mba hahazoana antoka fa ny vokatra vita amin'ny hazo ROC OEM dia afaka manatratra hatrany ny fironana lamaody ary mandeha eo alohan'ny mpifaninana hafa. Nanangana ivon-toerana R&D izahay miaraka amin'ireo injeniera manodidina ny 12 mamolavola ny ary mampivelatra ny tontonana hazo, vonona hanome serivisy tsara kokoa ho an'ny mpanjifantsika ary hampiroborobo ny fifaninanana. Izahay dia manolo-tena hanampy ny mpanjifanay hanatsara ny endrik'ilay orinasan'ny orinasan'izy ireo, hanatsara ny sandan'ny marika ary hanafohezana ny fampandrosoana LT, hampihena ny vidin'ny famokarana. Afaka manome serivisy OEM / ODM fijanonana iray izahay. Tao anatin'ny 5 taona lasa, nahavita fahombiazana lehibe ny ekipa lehibe. Tranga marobe no eken'ny mpanjifa ary nanampy azy ireo hisambotra fizarana tsena bebe kokoa.
Manana ny azy manokana izahay amin'ny orinasa plywood / orinasa OSB / orinasa MDF ary orinasa mpamokatra vokatra LVL, Factorying Tooling hihaona amin'ny famokarana OEM takian'ny mpanjifa. Fivoahana isam-bolana hatramin'ny 70000CBM (PLYWOOD, OSB ary MDF sns).
Manana dingana fanaraha-maso kalitao anatiny henjana izahay amin'ny fizahana ara-nofo, ny fizahana amin'ny famokarana ary ny fizahana mialoha ny fandefasana. Izy io dia hahazoana antoka fa afaka mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa ny vokatra ary azo antoka kokoa amin'ny kalitao ny vokatra OEM. Ny orinasanay dia nandalo ISO9001 ary ny vokatra dia nahazo mari-pahaizana CE, FSC, JAS-ANZ, PEFC, BS sns. Mino izahay fa tsy amin'ny kalitao tsara ihany dia afaka mahazo fitokisana avy amin'ny mpanjifanay.
Nandritra ny taona maro niainany tamin'ny fanondranana entana dia afaka mitantana am-pilamina sy ara-potoana ny fizotran'ny fanambaràna fadin-tseranana izahay mba hahazoana antoka ny fandefasana ny fandefasana ny mpanjifa. Mino isika rehetra fa ny serivisy tsara indrindra no singa manafatra indrindra hahazoana ny fitokisana avy amin'ny mpanjifantsika ankehitriny.
Atombohy amin'ny alàlan'ny plywood, OSB ary MDF kalitao ny orinasanao vaovao. Avelao izahay hanao ny vokatrao OEM / ODM ary hampiroborobo ny orinasanao. Mifandraisa azafady ROCPLEX izao.
OEM / ODM fomba
Inona ny fizotran'ny tontonana hazo ROCPLEX OEM / ODM?
1. Fanadihadiana takiana
Amin'ny maha dingana voalohany amin'ny fampandrosoana, ny ekipan'ny famokarana dia vonona handray anjara amin'ny famakafakana takiana. Ho an'ny mpanjifa sasany manana hevitra tsy azo ovaina, toy ny tontonana hazo ampiasaina amin'ny fivarotana lehibe na ampiasaina amin'ny tranokala fananganana, dia handamina ny ekipanay injeniera izahay, ekipa marketing mba hanomezan'izy ireo ny torohevitra arak'izy ireo mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fiandrasana ny tsena ny vokatra.
Amin'ity dingana ity dia manao lisitry ny toetra tiana an'ity tontonana hazo ity izahay.
2. Famerenana teknika
Miaraka amin'ny lisitry ny toetran'ny olona tiana, ny ekipan'ny famokarana, miaraka amin'ny departemanta mividy, dia mifandray amin'ireo mpamatsy fitaovam-pitaovanay, mba hanao takelaka fandaminana amin'ny antsipiriany an'ireo singa.
Amin'ity dingana ity dia mety hiverina any amin'ny dingana voalohany isika noho ny olana mety mahavita na mahomby.
3. Ny vidiny sy ny fandaharam-potoana
Miorina amin'ny fikarohana teo aloha, ROCPLEX dia afaka manome endrika fiasa sy fandaharam-potoana, izay miovaova be amin'ny fahaiza-manao, ny habetsahana ary ny fahaizan'ny rojo famatsiana.
Amin'ity dingana ity dia afaka manao sonia ny fifanarahana ofisialy isika.
4. Fampivoarana ny santionany
ROCPLEX dia hanao santionany, antsoina hoe santionany amin'ny injeniera, izay manodina ireo endri-tsoratra noforonina rehetra. Ity santionany ity dia iharan'ny fitsapana boulng, fitsapana fitoniana, fitsapana hery ary fitsapana maharitra.
Manentana ny mpanjifa handray anjara amin'ny fampandrosoana izahay mba hanomezana valiny eo noho eo.
Miaraka amin'ny santionany amin'ny injeniera afa-po, afaka miroso amin'ny dingana famokarana fitsapana isika. manombatombana ny loza mety hitranga amin'ny tsy fitovizan'ny famokarana marobe, ny fahatokisana ny mpamatsy ary ny fandaharam-pamokarana goavambe.
6. Famokarana be
Miaraka amin'ny olana rehetra voavaha sy hitan'ny risika dia miditra amin'ny dingana farany amin'ny famokarana goavana izahay.
Misorata anarana amin'ny mailakao hijanona ho vaovao hatrany amin'ny doka, fihenam-bidy, varotra ary tolotra manokana
Adiresy: Senso Center, Pizhou City, faritanin'i Jiangsu, Sina
Momba ny ROC